Ɔkwampaaefo—Dza Ɔkyerɛ ma Jehovah Adasefo
Wɔtaa dze “ɔkwampaaefo” frɛ obi a ɔpaa kwan ma afofor dzi ekyir. Nna Jesus tse dɛ ɔkwampaaefo. Wɔsomaa no baa asaase do dɛ ɔmbɛkã nkwagye ho asɛm na ɔmpaa kwan mma afofor mfa do nnya nkwa. (Matthew 20:28) Ndɛ so, n’ekyirdzifo rusũasũa no dze nam mber pii a wɔdze reyɛ ‘esuafo’ dɛ mbrɛ wobotum. (Matthew 28:19, 20) Hɔn mu binom etum dze hɔnho ahyɛ dza yɛfrɛ no akwampaae edwuma no mu.
Ɔkwampaaefo yɛ ber nyina ɔsɛmpakafo. Jehovah Adasefo nyinara yɛ asɛmpa no ho adawurbɔfo. Naaso, binom atoto ndzɛmba yie wɔ hɔn asetsena mu ma wɔsom dɛ daa akwampaaefo. Wɔdze ndɔnhwer 70 yɛ asɛmpakã edwuma no bosoom biara. Dza ɔboa hɔn ma wotum yɛ iyi nye dɛ, hɔn mu piinara tsew mber a wɔdze yɛ edwuma pɛ sika no do. Wɔpaw binom dɛ akwampaaefo etsitsir ma wɔsom wɔ mbea a wohia Ahendzi adawurbɔfo kɛse. Iyinom dze ndɔnhwer 130 nye ekyir yɛ ɔsom edwuma no bosoom biara. Akwampaaefo bɔ mbɔdzen dɛ wɔbɛma hɔn asetsena aba famu, na wɔwɔ awerɛhyɛmu dɛ Jehovah bɛma hɔn nsa akã asetsena mu ehiadze. (Matthew 6:31-33; 1 Timothy 6:6-8) Hɔn a wonntum mmfa hɔn ber nyina nnyɛ akwampaae edwuma no tum yɛ akwampaae aboafo aber biara a wobotum. Wɔdze ndɔnhwer 30 anaa 50 kã asɛmpa no wɔ bosoom a wɔbɛpaw no mu.
Nyankopɔn nye nyimpa ho dɔ nye adze a okenyan ɔkwampaaefo. Tse dɛ Jesus no, hɛn so yehu mbrɛ nyimpa pii hia Nyankopɔn ho nyimdzee no. (Mark 6:34) Naaso, yɛwɔ nyimdzee a obotum aboa hɔn ndɛ ma woeenya daakye ho enyidado a odzi mu. Ɔdɔ a ɔkwampaaefo wɔ ma afofor no kenyan no ma oyi ne yamu dze ne ber nye n’ahoɔdzen boa afofor ma wɔtse asɛmpa no. (Matthew 22:39; 1 Thessalonicafo 2:8) Ɔnam yi do ma ɔkwampaaefo ne gyedzi yɛ dzen, ɔbɛn Nyankopɔn, na onya nhyira anaa enyigye kɛse.​—Ndwuma 20:35.
Woana nye ɔkwampaaefo? Kyerɛkyerɛ mu.
Ebɛnadze na okenyan binom ma wɔdze hɔn ber nyina yɛ akwampaae edwuma no?